Uhlu lwe-imeyili lwe-CPA | I-CPA imeyili Marketing | Uhlu Lokuposa
Database lakamuva Lokuposa » Uhlu lwe-imeyili lwe-CPA
Ikheli le-imeyili le-CPA
Uhlu lwe-imeyili lwe-CPA lunolwazi lokuxhumana lwe-accounting yomphakathi eqinisekisiwe. Uhlu lokuthengisa nge-imeyili lwe-CPA luzokusiza ukuthi ufinyelele kuwo wonke ama-akhawunti ezinkampani. Uzofinyelela kumuntu weCPA kalula ukusebenzisa uhlu lwethu lokukhangisa nge-imeyili lweAccountant. Ungabathumela okunikezwayo noma izindaba zenkampani yakho, futhi kuluhlu oluphindwe kabili lokungenela ukuze ukwazi ukubathumela umnikelo.
Kuqukethe ukumaketha nge-imeyili kulula kunakuqala lapho unedatha enembile ongathembela kuyo. Uhlu lwethu lokukhangisa nge-imeyili lwe-CPA luthola amakheli wokuxhumana ngqo owadingayo. Ngakho-ke, qiniseka ukuthi uthenga imininingo egciniwe ye-imeyili ye-CPA efanelekayo esetshenziswa kalula nge-CRM yakho.
Database lakamuva Lokuposa likunikeza i-accountant yomphakathi eqinisekisiwe ulwazi lokuxhumana. Uhlu lokuposa lwe-CPA lubandakanya umenzi wesinqumo amakheli eposi. Uhlu lokuthengisa lwe-imeyili lwe-CPA luzokunikeza i-ROI enhle. Uhlu lwe-CPA lungenye yezinhlu ezinhle kakhulu zokuthengisa nge-imeyili. Imininingwane ye-imeyili ye-CPA izokusiza ukumaketha insizakalo yakho noma umkhiqizo kumikhankaso yokuthengisa ye-imeyili.
Ikheli le-imeyili le-CPA libizwa nangokuthi uhlu lwe-imeyili ye-b2b. CPA futhi wabiza uhlu lwe-imeyili lababhali. Ama-database we-imeyili we-Accountants azokwandisa ukuthengisa kwakho kwenkampani. Uhlu lokuthengisa nge-imeyili lusiza kakhulu kwimikhankaso yokuthengisa online.
Thenga CPA Email Ikheli Ikheli Ukumaketha
Uhlu lweSampula yeCPA
Imikhombandlela Yokuthengisa Eqondisiwe ye-B2B, i-B2B Database ye-imeyili, kanye nohlu lwe-B2B Lokuposa Ukukhulisa Ibhizinisi Lakho. Imininingwane yethu ye-imeyili inikeza imininingwane ephelele yokukhangisa enjengegama lokuxhumana, isihloko, ikheli le-imeyili, inombolo yokuxhumana yebhizinisi, ikhodi ye-SIC nokuningi. Kuqukethe ukumaketha kwe-imeyili kulula kunakuqala lapho unedatha enembile ongathembela kuyo. Uhlu lwethu lokumaketha nge-imeyili lwe-CPA luthola amakheli oxhumana nawo ngqo owadingayo.
Izinsizakalo Zokugcina ze-Mailing Database zamanje zibalule kakhulu abahlinzeki beDatha be-B2B abanika uLuhlu Lwama-imeyili Olusizo futhi oluyiqiniso. Idathabheyili Yokugcina Yamahhala inikezela ngesizinda sedatha ye-imeyili ye-Cpa enamandla futhi eyenziwe ngezifiso yabathengisi ukuze bakwazi ukuhlala benokuxhumana namakhasimende ngemikhankaso yethu yokumaketha ye-imeyili eklanyelwe ngokuhlelekile kanye nama-imeyili aqondile.
CPA Uhlu lwe-imeyili Umbuzo & Impendulo